ပန်ဒိုရာ: The story of Pandora's life A to Z
A to Z ကို သဘောကျ စွာ ဖတ်ပြီး
အဲဒီလောက်သာ အင်္ဂလိပ်စာ ရေးရမယ်ဆို မချောင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် မြန်မာမှု ပြုလိုက်ရင် ကောင်းမယ်။ ဥပမာ "ကကြီး" ကရင်းနဲ့ ကြီးကြီးသွားတဲ့ ကရင်ကြီး.. "ခကွေး" ခါးလေးစောင်းရင်းကနေ ကွေးသွားလို့ မထနိုင်တဲ့ ဒေါ်ခင်ပွေး စသဖြင့်ပေါ့..။ မပန်ရေးတဲ့အထဲမှာ It reminds me of how small our world is. So are our ambitions.ကိုတော့ အကြိုက်ဆုံးပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့က သာမညောင်ညတင် မဟုတ်ဘူး။ သဲမှုန်မှာ ကပ်နေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားပေါ်က သန်းတစ်ကောင်သာသာပဲ ရှိတယ်ဗျာ။
Can I get translations of them?
ပုံ ဗျစ်တသျှလို နားမလည်သူတစ်ဦး
ကဲ...A...to ..Z ကိုဖတ်လိုက်တာ..ရေးခိုင်းသူရောရေးပေးသူရော..စိတ်ကူးလေးကောင်းပါ့ဗျာ...
ပန်ရေ.. ရေးထားတာလေး မိုက်တယ်ကွ..
မနော်ဆီက ဖတ်ပြီး မပန်ရဲ့ A to Z ကိုထပ်လာဖတ်ပါတယ်...။ အေကနေဇက်အထိ အတွေးလေးတွေကောင်းတယ်...။
Many people talk about it. I know that it’s bringing me to where I wanna be, but the maintenance of it is something costly. Can I stay without it?"
ဒါကတော့ အတော်တူတယ်... မဗေဒါအတွက်တော့ ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ မပြောတတ်ဘူး.. ခုထက်ထိတော့ Can I stay without it လို့ပဲ မေးချင်တဲ့ အလုပ်တွေချည်းပဲ... ဟဲ.. ဟဲ..
Z for Zero ကို အကြိုက်ဆုံး ဖြစ်နေတယ် ;)
Ah ! A beautiful and colour portrayal of your life
At times abstract, like "Nothingness, I exist merely because I don’t exist beyond"
At times witty, "Alpha, Suppose this is the beginning of my life. Let’s see what’s next!"
At times poignant, like "Occupation, Many people talk about it. I know that it’s bringing me to where I wanna be, but the maintenance of it is something costly. Can I stay without it?"
At times hilarious, "Queen, Excuse me! This is what I never aim to become." Hahaha !
Your grasp of the English Language is certainly impressive, considering it's your second language. May we exit with our unfinished tasks finished....not all, but at least the ones that matter most to us and to those around us ; D
Encore! Please write more!